Chazvino ChiLatin American Nhetembo (I) | Zvazvino Zvinyorwa
Chazvino ChiLatin American Nhetembo (I)
Kana tichitaura nezve nhetembo dzeSpanish-America, zita rekutanga rinobuda kana rimwe rekutanga, hapana mubvunzo kuti ndere Ruben Dario, anaani Mazuva ano, asi kune nhetembo dzeSpanish-America kupfuura iyi kana naJosé Hernández, mumwe mudetembi mukuru.
Pakati pevamwe, manzwi anotevera anobuda pachena: Gabriela Mistral, José Martí, Pablo Neruda, Octavio Paz, César Vallejo y Vicente Huidobro. Muchinyorwa chino tichataura nezvevatatu vekutanga, uye mune imwe ichaburitswa mangwana tichataura nezvevatatu vekupedzisira. Kana iwe uchida nhetembo, kana pane kudaro, yakanaka nhetembo, usamire kuverenga izvo zvinouya.
Gabriela Mistral, kana chii chakafanana, Lucia Godoy Aive mumwe wevadetembi venguva iyo uyo nhetembo yake akaedza kutsvaga kwechokwadi, chokwadi chezuva nezuva, achitizirawo muhukama hwepedyo.
Gabriela, aive Nobel Prize yeMabhuku muna 1945, akanyora "Masoneti erufu", rimwe remabasa ake akanakisa uye akakodzera. Iyo yakafuridzirwa neiyo kuzviuraya kwaRomelio Ureta, rudo rwake rwekare. Uye sonnet yekutanga inoenda seizvi:
Kubva pane chando chando icho varume vanokuisa iwe mukati,
Ndichakudzikisira pasi kunzvimbo inozvininipisa uye ine zuva.
Kuti ndinofanira kurara mariri varume vaisaziva,
uye kuti tinofanira kurota pamutsago mumwe chete.
Ini ndichakuradzika pasi pasi paine zuva ne
kutapira kwaamai kumwanakomana akarara,
uye pasi rinofanira kuva hunyoro
pakugamuchira muviri wako semwana anorwadziwa.
Ipapo ndichasasa guruva ndokumutsa guruva,
uye muguruva rebhuruu uye rakareruka remwedzi,
light offal ichavharirwa.
Ndichaenda ndichiimba mibairo yangu yakanaka,
Nekuti kune iye akavanzika honorer ruoko rwe kwete
uchadzika pasi kuzopokana nemaoko ako mashoma emapfupa!
José Marti, wekuCuba, aive nhetembo senzira yakatendeseka yekutaurirana, inoratidzwa nenzira yakasarudzika kuburikidza neyakareruka uye yemazuva ese. Nyanduri anozvizivisa ari "Ndima dzakareruka" nhetembo yake, nekuti mairi akaunza uye akaumba mweya wake sezvaive. Paanonyora aya mavhesi anozvizivisa: chinhu chinoumbwa nezvinhu zvakasiyana uye zvinopesana, sezvinoitika kana achidoma mazita "Kushaya simba kwenondo" pamberi "Simba resimbi". Izvo zvakare zvinoratidza manzwiro senge kubatana uye kubvisa chigumbu:
Ita ruva jena
muna Chikumi saJanuary
Kune shamwari yakatendeka
uyo anondipa ruoko rwake rwechokwadi.
Uye kune hutsinye hunondibvisa
moyo wandinogara nawo,
Rukato kana rukato kurima;
Ini ndinokura chena ruva.
Handizive kuti kangani ini ndanyora nezve uyu munyori, asi ini handinete. Neruda aive uye acharamba ari rimwe remazita makuru munhetembo dzenyika, kwete muLatin America chete. Ingo nekutumidza zita rako basa "Nhetembo makumi maviri dzerudo uye rwiyo rwekusuwa", rakaburitswa muna 1924, tiri kutaura zvese ... Uye ndingashaye mitsara yekuburitsa zvese zvinokodzera kuverengerwa nemunyori uyu. Asi ndichave mupfupi, kana zvirinani, ndichaedza kuve:
Kuti iwe unzwe ini
vanoonda dzimwe nguva
kufanana netsoka dzegungwa pamhenderekedzo.
Necklace, rakadhakwa rattlesnake
nekuti maoko enyu akapfava samazambiringa.
Uye ndinotarisa mazwi angu ndiri kure.
Kupfuura yangu ndedzako.
Ivo vanokwira mukurwadziwa kwangu kwekare senge ivy.
Vanokwira madziro akanyorova seizvi.
Iwe ndiwe unopa mhosva pamutambo weropa uyu.
Vari kutiza nzvimbo yangu yerima.
Iwe unozadza zvese, iwe uzadza zvese.
Pamberi pako vakagara kusurukirwa kwaunogara,
uye vajaira kusuwa kwangu kupfuura iwe.
Zvino ndinoda kuti vataure zvandiri kuda kukuudza
kuitira kuti iwe ugovanzwa sezvandinoda kuti unzwe kwandiri.
Mhepo yehasha ichiri kuvadhonza.
Madutu ehope achiri kuvakunda dzimwe nguva.
Iwe unonzwa mamwe manzwi muzwi rangu rinorwadza.
Misodzi yemiromo yakare, ropa remikumbiro yekare.
Ndide, mudiwa. Usandisiya. Nditevere
Nditevere, shamwari, mune iyo fungu rekutambudzika.
Asi mazwi angu ari kusvibisa nerudo rwako.
Iwe unobata zvese, iwe unobata zvese.
Ndiri kugadzira chishongo chisingaperi kubva kune vese
Yemaoko enyu machena, akapfava semazambiringa.
Kana iwe wakaifarira uye wakanakidzwa nekuverenga chinyorwa ichi sekuwanda kwandakaita kuchinyora, usapotsa chikamu chechipiri chichaburitswa mangwana, China. Mariri tichataura muchidimbu nezvaOctavio Paz, Cesar Vallejo naVicente Huidobro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Chazvino ChiLatin American Nhetembo (I)
Ini ndinobva kuTucumán uye ndinorarama nenhetembo yechiito murals ndichivaverenga zuva nezuva. Ndakafarira kuona iwo wekuvhara mufananidzo mune chinyorwa. Ndatenda!
Ongororo: El carbonero, naCarlos Soto Femenía